Farta Hippie ee ugu fiican | Hal-abuurka khadka tooska ah
Farshaxanka hippie ugu fiican
Iris Gamen | | Dhiirrigelinta
Aynu samayno sida jilayaasha gadaal u noqda filimada mustaqbalka, laakiin annagu Waxaan u safri doonaa wixii hore si aan kuugu soo bandhigno xulashada xarfaha hippie.
Tobankii sano ee 70-meeyadii waxay ahayd marxalad taariikhi ah oo leh dhaqdhaqaaqyo bulsheed oo badan iyo isbeddello dhaqameed oo gacan ka geystay qaybta fanka garaafyada. Mid ka mid ah sifooyinka muddadan ayaa ahaa baahida bulshadu u qabto in ay isu muujiso sida la buunbuuninayo, iyada oo loo marayo muusikada, dharka iyo farshaxanka.
Dhaqdhaqaaqa hippie wuxuu ahaa mid ka mid ah isbeddellada calaamadeeyay waayaha caanka ah taasina waxay saamaysay goobta muuqaalka.
1 Saamayntii 70-yadii
2 xarfaha hippie
2.2 Ka fog
2.4 Bariiska xawaashka
2.5 Dhaqdhaqaaqa Hippie
2.7 Alt Retro
2.9 Farta Ubax Dhalan
2.10 Lucidity Extras
2.11 Hippie mojo
2.12 Xagaaga jacaylka
2.13 jeebka sinta
2.14 Kuul Caloosha
Naqshadaynta nooca wejiga ayaa maray leexashada 360-degree, nashqadaha ayaa ka guuray qaab-dhaqameedka ilaa hadda, iyo wejiyada retro ayaa bilaabay inay soo baxaan 70-meeyadii, oo lagu sawiray gacmo, dareere iyo qaabab bilaash ah.
Yaa aan xasuusan calaamadaha discos ee 70s, qaar ka mid ah far waaweyn oo leh ku dhawaad ​​nolol iyaga u gaar ah, oo ay dhiiri galiyeen nalalka neon-ka.
Waqtigaan waxay soo bandhigayaan Farsamooyinka cusub ee qorista, sida Letraset, xaashida farta iyo walxaha kale ee la wareejin karo, iyo Sawirka Sawirka Sawirka Sawirka, kaas oo isticmaalay xadhko waaweyn oo xunxun oo ay ku jiraan jilayaasha. Labada farsamooyinba waxay caawiyaan habka wareejinta farta mid sahlan oo ka jaban.
70-meeyadii ayaa goob joog u ahaa dhaqdhaqaaqyo bulsheed oo kala duwan iyo damacyo, kuwaas oo u xaglinayay muuqaalka noocyada kala duwan ee qoraallada. Wajiyada noocaan ah waxay ku soo caan baxeen jilayaal, buunbuuninta serifyada iyo dhammaadka.
Markaan caddeeyo, maxay yihiin dhinacyada ugu yaabka badan ee noocyadan xarfaha ah, halkan waxaa ku yaal liiska xarfaha ay saameeyeen 70-meeyadii.
Waa qoraal-qoraal ah oo lagu maamuuso soo jiidashada 70-meeyadii. Jilayaashiisu waxay leeyihiin Waxay ku dhammaadaan qaababka laalaabka, geesahooduna waa wareegsan yihiin, waxay noo horseedi kartaa inaan xasuusano madax-gacmeedyo laga soo bilaabo caruurnimadayadii. Fartaani waxay la socotaa liiska xarfaha far waaweyn iyo kuwa yaryar.
Far ay dhiirigelisay 70-meeyadii, kaas oo ina soo bandhigaya jilayaal leh geeso wareegsan. Waxay leedahay saameyn cad oo dhaqdhaqaaqa hippie ee sanadahaas. Intaa waxaa dheer, waxay ka kooban tahay taxane ah 22 astaamood oo gacanta lagu sawiray si loogu daro naqshadaha.
Xaaladdan oo kale, waa a daabacaado culus oo madadaalo leh oo lagu yaqaan 70-meeyadii, ay saamaysay xayaysiisyada gacanta lagu qoray. Farta oo bixisa xarafyo kala duwan oo xarafaheeda ah, taasoo siinaya jilayaal madadaalo leh.
Dhaqdhaqaaqa hippie wuxuu ku jiraa hawada oo leh wejigan. Qoraal-qoraal leh qaab-dhismeedka ballaaran ee jilayaasha, marka lagu daro dhammaadka fiiqan ee mid kasta oo ka mid ah xarafkiisa. Qaar ka mid ah jilayaasha, waan ka heli karnaa walxaha qurxinta wakhtiga dhamaystirka istaroogga xarafka.
Waa far qoraal ah oo aad isticmaali karto oo keliya shaqsi ahaan. Waa far ku habboon naqshadaha lagu dhiirrigeliyay xilligaa taariikhiga ah. Waxa ay soo bandhigaysaa liis dhamaystiran oo jilayaasha, labadaba far yar iyo weynba. Sidoo kale, a Qoddobka qosolka leh ee ku jira far-qoraalkan ayaa ah in calaamadaheeda lahjadu ay yihiin calaamadaha nabadda.
Nooca tijaabada ah ee uu sameeyay Sergiy Tkachenko. Waa ilo leh qaar stroke aad u dhumuc weyn oo wareegsan. Jilayaalkeeda, waxaad arki kartaa laba dhammaad oo kala duwan, mid wareegsan iyo kan kale oo gebi ahaanba toosan. Intaa waxaa dheer, wuxuu ku ciyaaraa walxaha qurxinta si uu u siiyo mugga xarafkiisa.
Haddii waxa aad raadinayso ay tahay far-qoraalka wax-ka-qabashada calaamadaha wakhtiga, kani waa Alt Retro. ishaan, wuxuu ku ciyaaraa khadadka si uu u dhiso xarafihiisa. Waxa uu leeyahay shan nooc oo kala duwan oo miisaan ah si loo abuuro naqshado indho qabasho leh.
Nooca madadaalada leh ee qaabka xumbo ku salaysan 70-kii. Greta, waxaa lagu soo bandhigay laba nooc oo kala duwan oo u dhexeeya jilayaasheeda, oo la buuxiyay oo la qeexay. Waa xaraf aan caadi ahayn, dhammaan jilayaashiisuna isku mid ma aha, waxaan ka helnaa istaroog kala duwan, indho xaraf iyo joogyo kala duwan oo mid walba ku yaal.
Farta Ubax Dhalan
Haddii aad raadinayso nooca nooca hippie, halkan waxaan ku tusi doonaa tusaale kale oo ka duwan kuwii hore. Isku-dhafan xarfo leh xariiq qaro weyn iyo ubaxyo si xeeladaysan loogu dhejiyay jilayaal kala duwan.
Waa qoraal u eg caag laastiig ah oo u eg qaabkiisa. Waa farta hippie ee nashqadaha 60-meeyadii iyo 70-meeyadii. Jilayaasheeda, ma raacaan dariiq isku mid ah, laakiin mid kasta oo iyaga ka mid ah waxa uu leeyahay dhaqdhaqaaq.
Qoraalka dhaqdhaqaaqa Hippie iyo qaabka retro. Hippie Mojo, waxa ay leedahay jileyaal luqado badan ku hadla oo dhammaystiran iyo glyphs, iyo sidoo kale jilayaal kale.
Waa far leh istaroog wareegsan, kaas oo abuura dareen hippie guridda. Waa qoraal-gacmeed ka kooban xarfo waaweyn oo keliya.
Farta Iconian waxay soo bandhigtaa jeebka sinta, a nooca hippie oo aad u badan. Waxay leedahay 14 nooc oo kala duwan oo lagu siin karo hawo 60-meeyadii naqshadahaaga. Waa foormo lacag-bixineed, waa inaad heshaa shati si aad ganacsi ahaan ugu isticmaasho.
Iyada oo ku saleysan dhaqdhaqaaqa hippie, Beeyada Caloosha waa qaab qoraal ah oo ku ciyaara cabbirka jilayaashiisa iyada oo ujeedadu tahay in la dhiso jaantus iyada oo loo marayo meelaynta xarfaha.
Nooca Aprilia waa naqshad ka mid ah 70-meeyadii waana mid ka mid ah kuwa ugu xusuusta badan marxaladda. Waa iyadoo lagu saleynayo ubaxa Aberilla iyo qaabka ubbooyinkeeda, Taasi waa sababta aan u helno khadadka qalloocan ee jilayaasha font, taas oo ka dhigaysa naqshadaha mid aad u qurux badan.
60-meeyadii iyo 70-meeyadii waxaa ka buuxay saameyno dhaqameed taas oo iyana saameyn ku yeelatay xirfadlayaasha naqshadeynta garaafka, sababtoo ah isticmaalka midabka, naqshadaha daabacaadda ama qaababka sawirada, waxaas oo dhan, tani Muddadu waa mid ka mid ah kuwa ugu xusuusta badan adduunka fanka.
Waxaan rajeyneynaa in liiskan xarfaha hippie ee aan waligood ka bixin qaabku ay faa'iido u yeelan doonaan mashaariicda mustaqbalka, kuwaas oo aad ku siin doonto shakhsiyad weyn naqshad kasta. Waa qoraalo aan weligood laga tagi doonin, waa inta u dhaxaysa sannadihii 2014 iyo 2015, waxay caan ku ahaayeen shabakadaha iyo naqshadaha garaafyada.
Haddii aad tahay qof jecel dhaqdhaqaaqan, waxaanu kugu martiqaadaynaa inaad hesho qaabka qoraal-qorista ee aad ugu jeceshahay wakhtigan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Farshaxanka hippie ugu fiican
Tusaalooyinka ugu fiican ee baakadaha hal-abuurka ah
Sideen ku ogaan karaa Pantone midabka?